टन्सिल निको बनाउन अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय « Mayadevi Online News Portal
१० बैशाख २०७९ शनिबार ००:००
टन्सिल मासिनलाई लागिरहने मध्येको एउटा रोग हो । यसले धेरैलाई सताउने गरेको छ । मौसममा आउने परिवर्तन, चिसो तातो खान आदीका कारण टन्सिल हुने गर्छ । टन्सिल भएसँगै खान र पिउन निकै समस्या हुन जान्छ । तसर्थ हामी आज टन्सिलको घरायसी उपचार बारे जानकारी दिने प्रयास गर्ने छौ ।
हाम्रो जिभ्रोको ठीक पछाडि बदाम आकारको दुई छोटो छोटो अंग हुन्छ । जहाँ मुखबाट गलासम्म पुग्ने दुई यो अंग हुन्छ जसलाई टन्सिल भनिन्छ । यसले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमतालाई बढाउने कार्य गर्छन् । यसले शरीरको कयौं विरामी तथा संक्रमणबाट बचाउँछ ।
तर, कयौं पटक यो शरीरलाई बचाउने को प्रक्रियामा स्वयं नै बिरामी हुन्छ । संक्रमण या कुन अन्य कारणबाट टन्सिलमा पीडा हुन्छ । कयौं पटक यो यति बढ्छ की खान पिउनसमेत समस्या हुन्छ ।
यदी वर्षमा एकपट टन्सिल हुन्छ भने त यो सामान्य समस्या हो तर यसभन्दा धेरै भएमा यो खतरनाक हुन्छ । यदी टन्सिल भएको खण्डमा एन्टी बायोटिक लिनुको सट्टा केही घरेलु उपचार गर्न सक्नु हुन्छ ।
नुनमा एन्टी बायोटिक गुण हुन्छ । यसका लागि हल्का तातो पानीमा नून हालेर मुख कुरा गर्नुहोस् यसबाट निकै लाभ हुन्छ ।
त्यस्तै यस्तो अवस्थामा महले पनि फाइदा पु-याउँछ।
चिकेन सुप पिउनुस्
प्रकाशित मिति : १० बैशाख २०७९ शनिबार ००:०० १० : ११ बजे
यस्ता छन् गर्मीमा ‘लु’ बाट जोगिने उपाय
खुट्टा गन्हाउँछ ? मोजाभित्र कागती हालेर सुत्नुहोस्
यस्तो टाउको दुखाईले ज्यानै लिन सक्छ !
किड्नी सफा गर्ने घरेलु उपाय, हरियो पातयुक्त तरकारी
के हो हात्तीपाइले रोग ? रोगबाट बच्ने तरिका
बालबालिकाका लागि लाभकारी पाँच फल